Laba ngabahlanu abaphumelele, kusuka kwesokunxele nguMnu Mongezi Dlamini, Nkk Shiroma Bennimahadeo, Nkz Phumzile Manana, Nkz Jacqueline MCcarroll kanye noMnu Ayanda Magubane.
Umfundi WaseNyuvesi YaKwaZulu-Natal Udle Ubhedu Emqhudelwaneni i-Engen Pitch and Polish ObuseThekwini
Usomabhizinisi futhi ongumsunguli we-Anonaya Gardens (PTY) Ltd, uMnu Mongezi Dlamini nguyena odle ubhedu emqhudelwaneni i-Engen Pitch and Polish obuseThekwini, nobese kungowesi-9, njengoba uye ube khona njalo ngonyaka.
Ukunqoba kwakhe bekusho ukuzizuzela isamba semali esingu-R6000 kanye neviki lokuziqeqesha eRaizecorp, eGoli. Lolu qeqesho lubiza isamba semali esingu-R150 000. Uzibeke ethubeni lokuthi adlulele kowandulela owamanqamu, lapho bonke abanqobile eziFundeni ezahlukene bazothola olunye uqeqesho.
UDlamini ubengenele lo mqhudelwano ngokufaka ibhizinisi lakhe, i-Anonaya Gardens. Kuleli bhizinisi, uDlamini ubambisene noMnu Sihlosokuhle Mfeka owenza iziqu ze-MSc Biological Science.
Lo mqhudelwano, oxhaswe yi-Engen Petroleum, usetshenziselwa ukugqugquzela kanye nokuhlomisa ngolwazi labo abalubalubela ukungena kwezamabhizinisi kanye nalabo asebevele bangosomabhizinisi. Kuye kuvele nethuba lokuthi osomabhizinisi bethule amabhizinisi abo.
'Lo mqhudelwano uletha imibono emihle, uvuse amabhizinisi ngokuthi ufundise ngokuxhumana okuhle ngendlela efanele kanye nokuzethemba kulabo abasuke bewungenelile,' kusho u-UNathi Njokweni-Magida oyiNhloko yabamele uguquko kanye nababambe iqhaza kulolu hlelo.
Ukunqoba kukaDlamini bekungalindelekile kwazise uqale kabi. 'Ngangifake isicelo sokuthi ngibe yingxenye yalo mqhudelwano, kodwa ke ngehluleka ukuba ngomunye wabane abaqokwayo. Yize ngingazange ngiqokwe kodwa ngaya emcimbini njengomunye wezithameli. Bavula ithuba lokuthi kungangenela omunye wesihlanu. Ngabe sengiqokwa njengowesihlanu, ngehlula abanye osomabhizinisi abayisikhombisa esasibanga nabo indawo yesihlanu. Ngabe sengidla ubhedu ngesikhathi sengiqhudelana nabo bonke.'
I-Ananoya Gardens yinkampani encane esebenzisa indlela, i-hydroponic farming ukukhiqiza izithelo zeqophelo eliphezulu. Izitshalo zitshalwa ngaphandle kokusetshenziswa komhlabathi namanzi asuke emancane kakhulu asetshenzisiwe.
'Okuhle ngale ndlela yethu yokusebenza wukuthi asibasebenzisi ogandaganda, ngokwenza kanjalo kwethu kuchaza ukuthi akusikhinyabezi ukunyuka kukaphethiloli. Sesivele sesiqalile ukudayisa futhi sesithole inqwaba yezicelo ngomkhiqizo wethu ikakhulukazi ngaphakathi eNyuvesi,' kuchaza uDlamini.
UDlamini wenza unyaka wakhe wokugcina ezifundweni zeBachelor of Science, ugxile kakhulu kwiCell Biology kanye nakuMicrobiology. Uthando lwakhe olujulile lweZolimo lwaqala ngesikhathi esakhula esazinze eXobho, KwaZulu-Natali, lapho khona umkhulu wakhe wabe enepulaza khona.
'Njalo sasivuka ezintatha ngezimpelasonto siyosebenza epulazini lakhe, lapho esasichela khona umuthi wokubulala izinambuzane ezitshalweni. Sabe singekho isikhathi sokuphumula. Ngangike ngizibuze ukuthi ayikho yini enye indlela engcono esingenza ngayo ngoba kwakulukhuni kumfana omncane oneminyaka engu-13 ukuphatha lezo zibulali magciwane ngizichela ensimini enkulu,' kusho uDlamini ekhumbula okwakwenzeka kudala.
UDlamini ukholwa wukuthi leso sipiliyoni owasithola epulazini likayise sibe neqhaza elibalulekile ekukhetheni kwakhe izifundo azenzayo eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, akumthusanga futhi ukuthi eze nocwaningo nolwaholela ekutheni aqhamuke nezindlela ezingcono nezingambi eqolo kweZolimo. Akasiyena umafikizolo kwezamabhizinisi njengoba eyilunga lenhlangano i-Enactus esophikweni lwale Nyuvesi.
I-Enactus yinhlangano engenzi nzuzo ehlanganisa abafundi, yizifundiswa, abaholi kwezamabhizinisi ngenhloso yokuguqula izimpilo zabantu kusetshenziswa ibhizinisi ngokusho kwakhe uDlamini.
I-Ananoya Gardens yathola uxhaso ngaphansi kohlelo olwaziwa ngokuthi yi-UKZN InQubate Student Entrepreneurship, kusho uSimphiwe Mtambo wohlelo i-InQubate.
Echaza ngalolu hlelo lwabo, uMtambo uthe luhlose ukuthuthukisa umuntu ngayedwana, ukukhulisa amakhono osomomabhizinisi kanye nokubamba iqhaza ekuxazululeni ingwadla yobubha kanye nokuntuleka kwamathuba emisebenzi ngokuguqula ukucabanga kwabafundi, ngokuthi bangafuni imisebenzi, kunalokho kube yibona abadala amathuba omsebenzi. Lolu hlelo lwakhelwe ukuthuthukisa amakhono ngokuthi kutholakale ukwesekwa okuvela nakosomabhizinisi asebemnkantshubovu.
Amagama: ngu-Christian Ishimwe
Isithombe: Engen Pitch and Polish
Kuhlonishwe Ungoti Wesifazane KwezeNhlalomphakathi Wasenyuvesi YakwaZulu-Natali
UKZN’s Agricultural Economists Scoop Awards
UKZN Alumni Lunch at Richards Bay
Izingxoxo Ngodaba Lwelobolo
Abafundi Besikole I-SHS Bafake Isandla Emphakathini Wabalimi eMolweni
Diverse Research Delivered at Third Annual Fountainhill Estate Symposium
African Music and Dance celebrated at African Cultural Calabash and Cuisine
Tourism Students Visit KZN Historical and Cultural Sites